हेर्नुहोस् बझाङका कुन मतदानस्थलमा के भयो ? :: जयपृथ्वी डेली :: JpDaily
हेर्नुहोस् बझाङका कुन मतदानस्थलमा के भयो ?
जयपृथ्वी डेली शुक्रबार, वैशाख ३०, २०७९
बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका ७ स्थित सुनिपिपल चौर माबिमा मतपेटिका च्यातेर अहिले झडप भइरहेको छ । सुरक्षाकर्मीले ३ वटा फायरिङ गर्दा पनि झडप नियन्त्रणमा आएको छैन । नेकपा एमाले र गठबन्धनबीच झडप भएको हो । जुन नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा बझाङ जिल्ला सहइन्चार्ज ऐेन महरको मतदानस्थल पनि हो ।
बझाङ जिल्ला केदारस्युँ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ जगन्नाथ मावि सैन्सु मदान केन्द्रमा मतदाता र स्वतन्त्र उम्मेदवारका एजेन्टबीच झडप हुँदा मतदान कार्य रोकिएको छ ।
खप्तडछान्ना गाउँपालिका ५ खप्तड मावि कालुखेतीमा मतदान सुरु भएको ४ घण्टापछि गठबन्धनबीच सामान्य कुरामा विवाद हुँदा संरचना तोडफोड भएको तीन जना सामान्य घाइते भएका छन् । अहिले कडा सुरक्षा दिएर १०/१० जना गरेर मतदान भइरेहको छ । झडपका कारण झण्डै एक घण्टा मतदान रोकिएको थियो ।
जयपृथ्वी नगरपालिका ११ नानदेव आधारभूत मतदान केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबीच झडप हुँदा एक जना घाइते भएका छन् । झडपलाई साम्य पार्न प्रहरीले २ राउण्ड हवाइ फायर गरेको छ । अहिलेसम्म नानदेव आधारभूत मतदान केन्द्रमा २ सय ५० भोट खसेको जनाइएको छ ।
बझाङ्को दुर्गाथली4भैरव आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा मतदानका क्रममा तनाव सिर्जना भएर मतदान रोकिएको छ ।
थलारा गाउँपालिका ५ स्थित थलारा मावि खोलीमा पनि गठबन्धन र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । प्रहरीद्वारा हवाई फायर भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३०, २०७९ १२:२२